Voasakana ny BQ Cervantes Touch Light? Vahaolana amin'ireo olana ireo | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | BQ, mpamaky
Manana a Voasakana ny BQ Cervantes Touch Light? Satria maro ianareo no nitodika taminay naneho hevitra momba ny olanareo momba ilay Fitaovana BQ Cervantes Touch Light ary ny olany manakana tsy tapaka dia nanapa-kevitra izahay fa hanao lahatsoratra mitady vahaolana amin'ireo olana ireo.
Amin'izao fotoana izao dia navoakanay ny lahatsoratra miaraka amin'ny antony lehibe mahatonga ny fanakanana ary miaraka amin'ireo vahaolana sasantsasany izay nangoninay tamin'ny alàlan'ny tamba-jotra fa ny lahatsoratra kosa dia misokatra hatrany amin'ny mety ho fanavaozana izay ampianay rehefa hitanay izy ireo (ohatra, nangataka fanampiana amin'ny serivisy teknika BQ izahay fa mbola tsy nahazo valiny).
Mahatonga ny BQ Cervantes Touch Light ho voasakana
ny antony lehibe izay manakana ny BQ Cervantes Touch Light matetika Ireto manaraka ireto:
Mikaroha nomeraon-pejy manokana ao anaty boky
Hanketo amin'ny pejy iray izay tsy ny manaraka na ilay teo aloha
Mihodina haingana dia haingana na haingana dia haingana ny pejy
Soraty ny pejy
Miezaha miditra amin'ny tsoratadidy na naoty voatahiry
Atsaharo ny fitaovana
Amin'ny fanovana fampiharana
Fantatsika izao ny antony mahatonga ny fanakanana, andao hojerentsika ny fomba hamahana azy.
Tutorial: Mamorona fanangonana amin'ny Kindle anao
Vahaolana fanakanana ny Jiro mikasika ny BQ Cervantes
Tamin'ny valiny voalohany avy amin'ny serivisy teknikan'ny BQ dia nilaza taminay izy ireo fa ny tokony hatao aloha dia manavao na mametaka ny rafitra fiasan'ilay fitaovana. Mba hanatanterahana izany asa izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Sintomy ny rakitra voafintina misy ny fanavaozana http://www.bqreaders.com/descargas-cervantes-touch.html.
Unzip ny fisie rakitra ary adika ny folder bqupdate ao amin'ny fampirimana fakana karatra microSD tsy misy endrika. Ity fampirimana ity dia tokony ahitana ireo fisie update.img y update.asc.
Vonoy io ary ampidiro ao anaty slot microSD-ny karatra (alao antoka fa manana herin'ny bateria ampy ianao).
Tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra fanombohana (bokotra afovoany afovoany) ary ny bokotra on / off. Hatanjaka ny mpamaky ary hanomboka hametraka ny rafitra vaovao. Ankehitriny ianao dia afaka mamoaka ny bokotra.
Rehefa vita io dingana io dia hiseho ilay hafatra "fanavaozana vita soa aman-tsara". Mandra-pahatongan'izany dia aza manandrana mamono na manala ny karatra microSD.
Vita ity ary araky ny serivisy teknika mihitsy dia tokony ahitsy ny olana rehetra fa raha tsy izany dia tokony handeha ianao ary hametraka ny olanao amin'ny serivisy teknika mihitsy, izay hanampy anao na hanova ny vokatra.
Azonao atao ny mifandray aminy Serivisy teknika BQ amin'ity adiresy tranonkala manaraka ity.
Manantena izahay fa amin'ity fandraisana anjara kely avy aminay rehetra ity izay manana fitaovana Jiro mikasika ny BQ Cervantes ary mijaly amin'ny olana samihafa ianao, azonao atao ny mamaha azy ireo ary manomboka mankafy ny eReader anao tsy misy olana.
KFX Conversion, plugin Caliber ho an'ny Kindle
Fanazavana fanampiny - BQ Cervantes Touch Light, ny farany amin'ny eReaders vita any Espaina
Loharano - bqreaders.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » BQ » Voasakana ny BQ Cervantes Touch Light
fanantenana dia hoy izy:
nianjera ny ahy ary tsy manidy ahy na mamerina azy io indray.
Valiny amin'ny DESPERATE
Mandra-pahoviana ny baterian'ny BQ Cervantes Touch Light maharitra (amin'ny tena fampiasa) ??? Volana vitsivitsy lasa izay dia nomen'izy ireo ahy ny kinova Fnac ary na dia nijanona tsy nijanona aza ny WiFi sy ny jiro, tsy latsaky ny 4 andro fitsaharana ary mampiasa azy io mandritra ny minitra vitsy fotsiny dia miampanga ahy ho ambany bateria!
Salama, te-hanome hevitra anao aho mba hahitana raha afaka manampy ahy ianao, nomen'izy ireo boky maromaro aho ao amin'ny pdf izay fitsapana iray, novakiako ny voalohany nefa tsy nanana olana aho fa ny faharoa kosa rehefa manana takelaka 6 aho na mihoatra hamita ilay toko , mivoaka amin'ny iray toy ny lahatsoratra amin'ny ankavia izay hitanao kely dia kely ary avy eo ny takelaka banga mandra-pahatongan'ny toko iray hafa dia manomboka toy izao amin'ny zavatra rehetra ary na manao ahoana na manao ahoana filalaovako amin'ny endrika sy eao dia tsy afaka manao na inona na inona aho fa hanafatra ny mivoaka ny boky feno.Misaotra betsaka
Ny tsy ekena dia ny hoe mila mandeha manodidina ny famahana ireo mpampiasa isika isika, inona no tsy maintsy hataon'ny BQ sy ireo tompon'andraikitra
Ahoana no ahitanao ahy hanamarina ny bateria ary hamono azy mba hahazoana ireo fanavaozana RAHA VOAFATRA IZANY?
Maninona aho no tsy afaka miditra amin'ilay fivarotana?
Jordi Cabezudo Torralba dia hoy izy:
Tsy afaka miditra amin'ny magazay miantsena na rakibolana aho, milaza amiko fa tsy maintsy ampifandraisina izany, marina ny wifi ary isaky ny manandrana mampifandray azy aho hampavitrika ny fitaovana ary ny manaraka dia banga ny pejy, efa nanandrana ny zava-drehetra aho fa tsy teo. dia fomba iray. azonao omena vahaolana ve aho
Valio i Jordi Cabezudo Torralba
Tsy afaka miditra amin'ny fivarotana aho. Mitovy tanteraka amiko izany
Tsy afaka mandrehitra ny CTL-ko aho. Rehefa velominao io dia manomboka mirehitra haingana kokoa noho ny mahazatra ny jiro maitso, toy ny hoe hitsonika. Mamaly tsara izy, nampifandraisiko tamin'ny pc amin'ny usb izy ary tsy misy. Namerina namerina… Tena mamoy fo aho. Tsy mahita vahaolana amin'ny pejy ofisialy na amin'ny hafa aho. Misy mahatsapa izany ve?
Vao avy namoaka ilay bq cervantista billet lingt aho ary rehefa namela azy io ho fisalasalana aho, rehefa nandeha namadika azy aho dia nanakana
Alejandra, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy toa anao. Nihidy izy ary mirehitra haingana be ilay jiro maitso. Nametraka mailaka marobe tamin'ny alàlan'ny pejy ofisialy aho, saingy tsy mamaly ahy izy ireo ………… Tsy hitako izay hatao hafa, satria toa anao, nataoko tanteraka izay rehetra napetrak'izy ireo ary tsy miova izany
Misaotra betsaka, efa namboariko ny fianjerana.
Antony de Huelva
Manana tagus 2011 aho mandritra ny 8 volana ary ny efijery ihany no voasakana ary milaza fa tapaka ny serivisy teknika ary ny écran
Salama, manandrana mametraka boky ao amin'ny cervantes touch light aho ary tsy fantatry ny solosaina akory, io no faharoa hatramin'ny namerenako ilay voalohany, tsy manana olana ny solosainako, efa nojereko, misy afaka manampy ahy ve? Misaotra anao
Miarahaba an'i Rota, angamba efa nahita ny vahaolana ianao, saingy ... raha sanatria ka mendrika ny olona io:
Rehefa sendra ahy io dia novonoiko ilay bq dia averiko mivantana ary efa fantatry ny solosaina 🙂 Mey 2017
Whitney dia hoy izy:
Vao avy nividy jiro mikasika ny cervantes aho
Azo atao ao anaty lahatahiry ve ny boky, alain'ny mpanoratra, na lohahevitra sns ...?
Ahoana no anaovana azy raha toa ka manamafy?
Mamaly an'i Whitney
tsheaerer dia hoy izy:
Miezaka manao an'io aho, saingy tsy misy fomba.
-Nidina ny rakitra mifandraika (amin'ity tranga ity, ho an'ny Fnac Touch Light).
- esoriko ilay rakitra, adikao ilay fampirimana bqupdate mankany amin'ny fototr'ilay sd
- Miezaka mamono ny e-reader aho, araka ny voalaza eto, ary rehefa mipoitra ilay efijery "mamelona fitaovana" dia raikitra izany. Tsy mampiseho ny mavitrika fampihetseham-baravarana izay manondro fa mivoaka izy io, ary tsy misy fanavaozana azy na zavatra hafa momba azy. Nanandrana namela azy aho nandritra ny fotoana kelikely (30 ′, saingy tsy fantatro raha manao zavatra izy na tsia ...). Avy eo rehefa mamelona azy aho dia mirehitra, fa ny zava-drehetra kosa tsy miova. Imbetsaka aho no nanandrana an'ity dingana ity. Izaho aza dia nampidina ilay rakitra indray raha toa ka tsy nisintona tsara izany.
Andao hojerentsika raha misy manana hevitra ... nomeny ny sakaizako fotsiny, ary hatramin'ny andro voalohany (omaly) dia mihantona ity boky ity, amin'ny fotoana ezahinao hatao ... NA INDRINDRA (fidirana amin'ny tranomboky, ampireheto ny jiro , vonoy ny jiro, ampidiro ny fikirana, sns.), mandra-pahatongan'ny TSY TENA MAFY.
Efa nanana ebook fnac aho taloha (ilay voalohany nivoaka), ary ny marina dia tsy mankasitraka ireo fitaovana ireo aho. Io iray io koa dia nanome aretin'andoha be dia be ahy (lozisialy tena tsy miovaova). Tsy haiko raha Bq na fnac firmware, fa tsy hividy iray hafa aho na dia miankina amiko aza ny fiainako dia efa misy tsy fahombiazana 2 ...
Mamaly an'i tsheaerer
tshearer dia hoy izy:
Namboariko ihany ny toeran'ny orinasa, ary raha ny amiko dia toa niasa izy io. Amin'izao fotoana izao dia tsy nahantona na dia indray mandeha aza, raha teo aloha, ny fotoana faratampony nahazakan'ilay fitaovana tsy misy fanantonana dia 30 ″ ...
Angamba olana amin'ny fanavaozana ny firmware farany ...
Mamaly an'i tshearer
Tsy misy na inona na inona. Amin'ny farany, aorian'ny famolavolana be dia be (anisan'izany ny fametrahana kinova firmware taloha), dia tsy voavaha ny olako. Bq dia manolo ny ebook ho ahy (miaraka amin'ny vidin'ny fiverenana sy fandefasana ilay ebook vaovao amin'ny kaontiko, mazava ho azy…).
Ho anao izay nahomby tamin'ity mpamaky ity dia faly aho ary manantena aho fa mankafy azy io. Mety hiteraka fifaliana izany, fa ny zavatra niainako tamin'io dia nahatsiravina. Ny zavatra azo antoka indrindra dia ny tsy hanovako azy fa haveriko (raha avelan'izy ireo aho) ary mividy Kindle. Efa nanana iray aho ary TSY nanome olana ahy mihitsy.
ralfy66 dia hoy izy:
Mangatsiaka aho rehefa avy namaky. Misaotra betsaka, niasa tamiko ny fametrahana indray.
Valio i ralfy66
Tsy eo intsony ilay tondro eo amin'ny pejy farany, tsy haiko ny mamerina azy
Salama, nomeny ahy ny BQ CERVANTES hikasika hazavana ary tsy fantatro raha ara-dalàna ny hidiran'ny SCREEN APPLICATION (SETTING, LIBRARY, WIFI ary na dia ao anaty Boky iray aza) dia tsy mijanona amin'ny fisoratana anarana mandra-pisokafan'ny fampiharana. ZAVATRA IZANY ?? MISY MAHAY MITENY AZO ?? PQ ao amin'ny magazay izay nividianan'izy ireo azy dia tsy fantany na ara-dalàna izany na tsia. MISAOTRA ANAO
Valiny amin'ny GEMA
Maninona aho no tsy afaka mamaky boky voatahiry? Tsy hitako ny teny unarchive izay ilay hita ao amin'ny synopsis an'ilay boky
Salama, ny computer-ko tsy nahafantatra ny hazavana BQ mikasika azy koa ary noho ny tariby ampiasainao dia nampiasa iray tamin'ny telefaona HTC aho ary nahafantatra izany.
Salama ny bp anao nahazo logo Nubico eo ambonin'ny efijery aho ary tsy avelako hamaky boky very ny ampahany amin'ilay efijery ary tsy ho toy ny famoahana azy io raha misy afaka manampy ahy.
Nametraka ilay fiteny tany Basque tsy nahy aho ary tsy hitako izay hatao hametrahana azy amin'ny teny espaniola
Mamaly an'i begoña
arantxa rus dia hoy izy:
Tsy mamela ahy hamono azy akory aho. Ary rariny raha nanaiky ny hafatra d nubico izay nilazan'izy ireo tamiko fa tapitra ny famandrihako. Manoratra nubico aho satria mieritreritra aho fa nosakanany ny ebook. Jereo raha mamaly tsy ho ela izy ireo.
Mamaly an'i arantxa rus
Manoro hevitra anao aho mba hitady ny "fampahalalana momba ny fitaovana" ary avy eo "hamerina ny fanarenana ny orinasa". Raha te hahalala ny fomba hahitana azy ireo ao amin'ny ebook anao dia ampiasao ny mpandika teny San Google. Tsara vintana.
cauny01 dia hoy izy:
Maty ny ahy ... efa ela be ny nanome olana ... tsy manao n'inona n'inona ... obsolecensia voarindra ... :(
Mamaly an'i cauny01
fahanterana ... hehehehehe ... vakiana be
Amparo Llorens Aroca dia hoy izy:
Nividy bq Cervantes aho (izay tsy niriako) saingy nanizingizina izy ireo fa tsara izany, ary noho izany, miaraka amin'i Nubico aho manana boky 2000 hamaky, okay fa fantatrao (heveriko fa tsy tiako) izany tsy maintsy nisoratra anarana tamin'ny volana 9 euro ianao hahazoana ny boky, ka dia tavela irery niaraka tamin'ireo tao amin'ilay magazay aho, nefa tonga izao ny fandrika, miditra ny fivarotana rehefa tiany, ary ny 16 amin'ireo boky farany ihany no atolotry anao. toa fitaka ho ahy ny tsy fampandrenesanao ao amin'ny magazay momba an'io, satria te hanana iray hafa aho ary napetrak'izy ireo tamiko izany na eny.
Tsy afaka miasa ny fanontaniako raha tsy misy an'i Nubico faly? Tsy afaka mihodina ve ianao? ary miditra amin'ny tranokalan'ny boky? Ara-dalàna ny ebook raha efa manana an'ity famitahana Nubico ity
Valio amin'i Amparo LLorens Aroca
Mampalahelo fa raha hanitsiana ireo lesoka tokony ho voavaha ny trano bq alohan'ny hamarotany ny vokatra, isika mpanompo sampy dia tsy maintsy manery ny saintsika foana ary tsy mahay mamaky, rehefa avy nandany ny vola tamin'ny "fiasco".
Io no zavatra farany vidiko amin'ny bq.
Claudia C. dia hoy izy:
Manao ahoana daholo. Tena niasa tsara ho ahy izany hatramin'ny omaly rehefa nanjavona tanteraka ilay bokotra on / off.
Manana ny angon-drakitra momba ny serivisy teknika ianao, aiza no alehako?
Valiny tamin'i Claudia C.
Iosu I. dia hoy izy:
Cervantes mikasika hazavana.
Tapaka ny efijery misy ahy amin'ny toe-javatra mampiahiahy ary manoratra aminao aho hanomezanao ahy ireo andinin-tsoratra momba ireo kojakoja fanampiny hitondrana azy amina serivisy teknika tsy miankina (asa 20 euro).
Milaza amiko ny BQ fa tsy manome izany fampahalalana izany izy ireo ary raha te-hanamboatra azy aho dia ento any amin'ny sampan-draharaha teknikan'izy ireo (100 euro).
Tsy hanamboatra azy io aho, fa amiko dia voarara mandritra ny androm-piainany izy ireo amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra ao anatiny.
Valio amin'i Iosu I.
Salama omaly ny bq cervantes mikasika ny jiro avy amin'ny fnac dia navaoziko tamin'ny alàlan'ny wifi, rehefa vita ilay izy dia nanomboka natomboka indray saingy navela niaraka tamin'ny hafatra «mamadika ny fitaovana» ​​nanomboka teo ary tsy mandroso izany. Sady tsy mandeha io no tsy maty. Nanandrana nanangana azy io indray aho, namono azy ary namela ny bateria hilentika ary hamerina azy io ary tsy misy… mijanona ho iray ihany. Ny ataoko?
Delfin dia hoy izy:
Salama daholo, mitady BQ Cervantes Touch Light aho izay misy efijery vaky ary tianao amidy, izany hoe ireo tranga tiako ho tsara araka izay azo atao satria raha ny amiko dia tapaka ny eo aloha ary ao amin'ny BQ Tsy izy ireo no mivarotra ny faritra fanampiny.
Valiny tamin'i Delfin
kn dia hoy izy:
Salama, izaho dia manana olana mitovy amin'ny fianjerana rehefa manomboka amin'ny Touch Light. Nanaraka ireo dingana aho ary nametraka firmware 6.0.3 amin'ny 16GB SD HC. Nanampy ireo fisie voalaza ao amin'ireo fanehoan-kevitra ihany koa aho.
Ny olana dia manondro lesoka foana ny famakiana ny karatra SD rehefa alefa miaraka amin'ny bokotra notsindriana, ary avy eo dia tsy mitranga izany. Izy io dia voadika endrika amin'ny PC ho ExtFAT. Misy hevitra ve raha tsy mamaky ilay karatra?
Mamaly an'i kn
Ampio aho! dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, niaraka tamin'ny Fnac Touch aho plus voasakana nandritra ny telo andro niaraka tamin'ny hafatra hoe "Storage anatiny be ...". Afaka mampifandray azy amin'ny solosaina sy miditra amin'ny bokiko aho, fa tsy afaka manao zavatra hafa. Tsy hamela ahy hamono azy io, na hamerina azy amin'ny fomba an'arivony novakiako tao amin'ny forum sy YouTube .. Nangetaheta be aho. Feno ny bateria, ary azo antoka fa haharitra ela vao ho lany izy io vao hahita ny fihetsikao .. Misy hevitra ve?
Valio hanampy ahy!
Vela dia hoy izy:
Mamadika ny pejy ao amin'ny ebook-ko. Ny hazavana mikasika ny Fnac dia nanakana ahy ary mandeha ny maintso maintso. Ny iray amin'ireo vahaolana nomen'ny serivisy teknika ahy dia: ampidiro mandritra ny adiny roa ilay ebook ary kitiho mandritra ny iray minitra ny bokotra herinaratra. Araka ny nieritreretako azy dia tsy mandeha izany. Ity dia iray amin'ireo vahaolana marobe omen'ny serivisy teknika antsika izay tsy mandeha, heveriko fa manala ireo mpanjifa ary tsy miantso intsony noho ny fahasosorana isika. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry aho, tsy misy boky, mandritra ny 15 na 0 andro mandra-pivoahan'ny bateria hahitako raha afaka mamoha azy aho. Misy olona afaka manoro ahy momba ny boky tsy manana an'io olana io ve ary manana famerenana vatana hividy azy io avy hatrany.
Miarahaba an'ireo marary rehetra ao amin'ny BQ Cervantes
Valiny tamin'i Vela
Nanana ebook bq cervantes nandritra ny roa volana aho, nidina ny bateria tao anatin'ny roa andro, ara-dalàna io vokatra io satria amin'ny ebook hafa an'ny fianakaviako dia maharitra roa volana ny bateria.
Valiny tamin'i Jose López
Nanana ebook bq cervantes nandritra ny roa volana aho, nesorina ny bateriko tao anatin'ny roa andro, ara-dalàna io vokatra io, satria amin'ny ebook hafa ao amin'ny fianakaviako dia maharitra roa volana ny batterie.
Carlos del Castillo dia hoy izy:
Olana amin'ny efijery BQ Cervantes. Ny BQ Cervantes 4 ahy dia naharitra iray volana latsaka ... mampiseho ny tsipika sy ny toerana ny efijery ary mikasa ny hanome vola ahy 100 euro ny BQ hanamboarana azy, mandingana ny fiantohana. Ankoatra io dia toa nalemy be ilay mpamaky e. Nihantona matetika izy. Tsy miresaka momba ny serivisy aorian'ny varotra akory izahay (manjaka ny tombony noho ny serivisy ho an'ny mpanjifa). Araka ny nolazain'ny Galisiana fa tsy hiteny intsony!
Valiny tamin'i Carlos del Castillo
ny mandeha sy ny mandeha tsy mandeha amiko loatra
yolly dia hoy izy:
Ny torohevitra dia nanompo ahy tsara.
Ny rohy izay miseho dia tsy mandeha, fa nandeha tany amin'ny tranokalan'ny bq aho tao amin'ny fizarana fanohanana / fisintomana ary nakariko ny fanavaozana farany ary raha tsy izany dia narahiko ireo dingana araky ny voalaza sy ny zava-drehetra OK
Valio i Yoly
ampidino ny fanavaozana izay nilaza 6.0.3 fa mbola mitovy ihany. Tsy mamaly ahy izany rehefa mikasika ny efijery aho. Tsy haiko raha nanamarina na manana olana hafa. Vonjeo
Tsy afaka mandray fepetra hamaha azy aho satria tsy avelany hovonoiko akory !!
Tsy afaka miditra amin'ny magazay sy ao anaty aho
Salama maraina tsy afaka miditra amin'ny magazay miantsena na rakibolana aho, milaza amiko fa tsy maintsy ampifandraisina izany, marina ny wifi ary isaky ny manandrana mampifandray azy aho hampavitrika ny fitaovana ary ny manaraka dia banga ny pejy, efa nanandrana ny zava-drehetra aho ary tsy misy lalana. azonao omena vahaolana ve aho